के तपईलाई मुटुको रोग छ ? मुटु रोगीले कस्तो खाना खानुपर्दछ ? जानीराखौ - ज्ञानविज्ञान
पहिले–पहिले मुटु रोगलाई वृद्धवृद्धा मानिसहरूको रोग मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा मुटु रोग किशोर तथा युवा अवस्थाकै मानिसहरूमा समेत डरलाग्दो गरी फैलिएको पाइन्छ । मुटु रोग विश्वमा धेरै मानिसको ज्यान लिने प्रमुख रोग हो । त्यसकारण यसप्रति सावधान हुनैपर्छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयघात, कोलेस्टेरोल, युरिक एसिड आदिको समस्या निकै बढेको देखिन्छ ।
मुटुका धेरै जसो रोगहरू जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छन् । आजकल जीवनशैली व्यवस्थित छैन । अव्यवस्थित जीवनशैलीको नतिजा हो मुटुको रोग । आधुनिक सभ्यता, व्यस्त जीवन, महत्वकांक्षा, भोजभतेर, कम्प्यूटर, टेलिभिजन, अत्याधिक मानसिक तनाव, व्यायामको कमी, पैसा कमाउने दौड यी नै हुन् संक्षिप्तमा मुटु रोग बढ्नुका प्रमुख कारणहरू :
कुल क्यालोरीको ५५ देखि ६५ प्रतिशत कार्वोहाइड्रेटयुक्त खानेकुराबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । कार्वोहाइड्रेट जटिल किसिमका खाद्यपदार्थबाट प्राप्त भएमा राम्रो मानिन्छ । कुल क्यालोरीको करिव १५ देखि २० प्रतिशत क्यालोरी प्रोटिनयुक्त खानेकुराबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । चिल्लो कम गर्नका लागि कम चिल्लोयुक्त दूध, बोसो नभएको सेतो मासु, अण्डाको सेतो भाग आदिलाई खानामा समावेश गर्न सकिन्छ ।
मुटुरोग लाग्न नदिन कुल क्यालोरीको १० प्रतिशत मात्र चिल्लो पदार्थ भएको खाना खानुपर्छ । मुटु रोगको जोखिम छ भने कुल क्यालोरीको १० प्रतिशत मात्र चिल्लो पदार्थ भएको खाना खानुपर्छ । एक ग्राम तेलबाट ९ क्यालोरी शक्ति पाइने भएकाले तौल बढ्ने संभावना भएकाले कम मात्रामा तेलको प्रयोग गर्नुपर्छ । तसर्र्थ कम तेलमा पकाउने विधिहरू वफाउने, उसिन्ने पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
मुटु रोगका लक्षण र घरेलु उपचार
किन हुन्छ मुटुको चालमा गडबडी ? यस्ता छन् कारण र लक्षण
मुटुको चालमा हुने गडबडी भिन्नैखालको मुटु रोग हो। मुटुको चाल आवश्यकताभन्दा कम या बढी हुनुलाई हामी मुटुको चालको गडबडी भन्छौं।
समान्य अवस्थामा मुटुको चाल एक मिनेटमा ६० देखि १ सय पटकसम्म धड्किनुपर्छ। यदि त्यो भन्दा कम वा बढी पटक धड्कियो र त्यसले बिरामीलाई गाह्रो भयो भने हामी त्यसलाई मुटुको चालको गडबडी भन्छौं।
मुटुको चलमा गडबडी जुनै उमेर समूहका मानिसलाई हुन सक्छ। तर, उमेर बढ्दै जाँदा यसको जोखिम पनि बढ्दै जान्छ।
यस्तो समस्या कसैलाई जन्मजात हुन सक्छ भने कसैलाई मुटुमा संक्रमण भएर हुन सक्छ। हृदयघात वा अनियन्त्रि रक्तचापका कारण पनि मुटुको चालमा गडबडी आउन सक्छ। सुगर नियन्त्रण नभएका मान्छेलाई पनि यस्तो समस्या हुने गर्छ।
मुटुको चाल गडबडी भएको बिरामी आफैंलाई थाहा हुन्छ। बिरामीलाई मुटुको चाल गडबड हुँदा गाह्रो महसुस हुन्छ।
– रिगँटा लाग्न सक्छ।
– मुटु ढुकढुक हल्लिने हुन्छ।
– कोही रिगँटाले गर्दा बिहोस पनि हुन्छन्।
– कसैलाई छाती दुख्ने हुन्छ।
यस्ता लक्षण देखिए भने तुरुन्तै नजिकैको अस्पतालमा गएर ‘इसिजी’ गराउनुपर्छ। इसिजी गरेपछि वास्तविक समस्या के हो भन्ने पत्ता लाग्छ।
नेपालमा यो रोगको उपचार शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा मात्र सम्वभ छ। गंगालालमा पनि केही डाक्टरले मात्र मुटुको चाल गडबडी सम्बन्धी उपचार गर्छन्। नेपालभरिबाट बिरामी रिफर भएर आउँछन्। त्यसैले गंगालालमा यस्ता बिरामीको चाप अत्याधिक छ।
– कसैलाई जन्मजात हुन्छ।
– जन्मजात मुटुले करेन्ट प्रवाह गर्न सकेन भने वा धेरै करेन्ट प्रवाह गर्यो भने पनि मुटुको चाल कम हुन्छ।
– मुटुको संक्रमण हुँदा।
– हृदयघातपछि पनि मुटुको चालमा गडबडी हुन सक्छ।
– सबैभन्दा धेरैलाई हुने भनेको उमेरका कारणले गर्दा हो।
– उमेर बढी भएको मान्छेलाई मुटुको चाल कम पनि हुन सक्छ र बढी पनि हुन सक्छ। उच्च रक्तचाप बढी भयो भने वा लामो समयसम्म नियन्त्रण भएन भने मुटुको चालमा गडबडी आउँछ।
मुटुको चाल गडबड हुन नदिन कतिपय कुरा हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौं, कतिपय सक्दैनौं।
मुटुको चालमा गडबड हुन नदिन हामीले मुख्य कुरा त मुटुको रोग लाग्न दिनु भएन। त्यसकालागि खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ।
– धूमपान नगर्ने,
– मध्यपान नगर्ने,
– सुगर कन्ट्रोलमा गर्नुप¥यो,
– मोटोपन छ भने तौल घटाउने,
– नियमित व्यायाम गर्ने,
– खानपिनमा धेरै चिल्लो पदार्थहरु खानु भएन
– नुन धेरै सेवन गर्नु हुँदैन।
यी उपाय अपनाउँदा मुटुको चाल गडबड हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।
उमेरसँगै मुटुको चालमा आउने गडबडी र जन्मजात हुने समस्यालाई भने हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं।
मुटु सम्बन्धी रोग महिलालाई भन्दा पुरुषलाई बढी देखिनेगर्छ। महिलामा उत्पन्न हुने हार्मोनका कारण पुरुषका तुलनामा महिलालाई मुटु रोगको जोखिम कम हुन्छ। तर, महिनावारी बन्द भइसकेपछि भने महिला र पुरुषमा मुटुरोगको जोखिम बराबरी जस्तै देखिन्छ।
Don't Miss it सील प्याक गरिएको खानेकुरा खानुहुन्छ ? खासगरी महिलाले यस्तो खतरनाक समस्या झेल्नु पर्छ
Up Next कतिसम्म तपाईको मदिरा पिउने बानी छ ? यस्तो छ कलेजोमा मदिराको प्रभाव – जान्नुहोस्